Kuwani waa halyeeyga gaarka ah ee Pokémon ee Pokémon Go | Wararka IPhone
Waxaan sii wadaynaa inaan la sii socono shaqadeena, talooyinka iyo waxyaabaha aan muhiimka aheyn ee ku saabsan Pokémon Go. Xaaladdan oo kale waxaan kuu soo qaadaneynaa liistada saddexda Pokémon ee aadan awood u yeelan doonin inaad qabato, maxaa yeelay inkasta oo lagu daro Pokémon Go Pokédex, haddana lagama heli karo ciyaarta. Iyo sidoo kale qaar ka mid ah Pokémon oo daruuri kaa dhigi doonta inaad u safarto qaaradaha kale haddii aad rabto inaad qabato, maadaama loo yaqaan "Exclusive Pokémon", xubno ka muuqda kaliya qaaradaha qaarkood oo kaliya lagu qaban karo halkaas (ama ukunta). Kuwani waa halyeeyga gaarka ah ee Pokémon ee Pokémon Go mana dooneyno inaad ka maqnaato.
1 Pokémon Gaar ah oo Qaaradda ah
2 Halyeeyga Pokémon
Pokémon Gaar ah oo Qaaradda ah
Waxaan ka bilaabaynaa iyaga, iyagu waa kuwan Pokémon oo ka soo muuqan doona kaliya qaarad gaar ah. Kuwa ku nool xudduudaha u dhexeeya mid iyo tan kale waxay u sahlanaan doonaan xoogaa, kuwa kale, safarka ayaa ah midka kale.
Europa: Mudane Mime
America Waqooyiga: Tauros
Si kastaba ha noqotee, dhammaantood ma lumin, inkasta oo ay yihiin kuwo gaar ah, Pokémon waxay awood u leeyihiin inay ka soo baxaan ukunta, ha ahaadaan 5 KM ama 10 KM. Haddii aad rabto inaad ogaato nooca Pokémon ee ka soo baxa ugxan kasta, ka gal liiskayaga LINKAN.
Waxaan sidoo kale heli doonnaa Pokémon oo aadan awood u yeelan doonin inaad qabato, kuwa loo yaqaan halyeeyada oo aan ku jirin algorithm laakiin Pokédex. Kuwani waa Maqaalka, Zapdos, Moltres, Mew iyo Mewtwo. Kuwani waxaa laga heli doonaa aagag gaar ah oo Nintendo ay ku wargelin doonto. Waxba kama jiraan Everest ama meelaha khatarta ah ee la midka ah. Kuwani Pokémon waxay ku jiraan koodhka ciyaarta, laakiin uma muuqan doonaan sida caadiga ah Pokémon duurjoogta ah. Ugu dambeyntii isticmaaleyaasha xirfadlayaasha ah ayaa loo oggolaan doonaa inay qabtaan iyaga waqti xadidan, sidaa darteed soo qaadashada Pokémon-kan ayaa noqon doonta mid aad u adag oo si cad u noqon doonta hadal haynta xaafadda inta qandhada Pokémon Go ay socoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Kuwani waa halyeeyga gaarka ah ee Pokémon ee Pokémon Go
Ricardo Hirales dijo
Kaliya qoraal, waa Articuno… Salaan!
Jawaab Ricardo Hirales
hahaha waan un aqriyay waana run.
E Garrido dijo
"Kuwani waa Qodobka, Zapdos, Moltres, Mew iyo Mewtwo"
Ma aha "Maqaal" ee waa Maqaal
Jawaab E Garrido
Ditto kuma jiro ciyaarta sidoo kale, haddii aad rabto inaad ku dhejiso wararka.
Apple Car waxay dib u dhigeysaa soo saarideeda muddo hal sano ah, illaa 2021
PPHelper wuxuu noo ogolaanayaa inaan Jailbreak macruufka 9.2-9.3.3 laga bilaabo Safari oo aan lahayn PC ama Mac